Home Page Design နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘာတွေသိထားသင့်လဲ? -
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အတွက် Website တည်ဆောက်ပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ အတွက် Website Degisn Project တစ်ခုလုပ်ဖို့ စတင်နေပြီးလား? သင့်ရဲ့ Website ကို Visitor အများအပြား လာရောက် ကြည့်ရှုတဲ့ Website တစ်ခု ဖြစ်ချင်ပါသလား? အောင်မြင်တဲ့ Website တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ အချက်တွေကို အဓိကထားပြီး ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်…
-Call to Action ကိုသိသာ ထင်ရှားတဲ့ ပုံစံထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Visitor က သင့်ရဲ့ Website ထဲမှာပိုပြီး သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိခဲ့ရင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဝင်ရောက်နိုင်စေ ခြင်းက Website Traffic အတွက် အများကြီးသက်ဆိုင်တဲ့ အတွက် Home Page မှာ Call to Action Button ကို သိသာထင်ရှားအောင် ထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Tuesday June 16th, 2020/ Blog/0Comment